आइएमईका कार्डबाहकले बोता मःमःमा १५% छुट पाउने
काठमाण्डौ । काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको आइएमई लिमिटेड र चुनदेवी मार्ग गणेश वस्ती महाराजगञ्ज काठमाडौंमा अवस्थित बोता मःमबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आइएमई प्रिभिलेज कार्डबाहक सेवाग्राहीहरूले बोता मःममा १५ प्रतिशत विशेष छुट पाउनेछन् । काठमाडौंमा चार(४), ललितपुरमा एक(१) र भक्तपुरमा आउँदै गरेको एक(१)सहित...
काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि इच्छुकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै कार्यकारी निर्देशक बन्न इच्छुकलाई...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति नेपाल टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ढिलाइका कारण फोरजी÷एलटीई तथा एफटिटिएचलगायतका महत्वपूर्ण प्रविधिको उचित विस्तार तथा चालु आयोजनाहरुको सफलतापूर्वक...
शिवम् प्लस ओपीसी सिमेन्ट बजारमा
काठमाण्डौ । आफूलाई नेपालकैं नं. १ ओ.पि.सि. सिमेन्ट दाबी गर्ने शिवम सिमेन्टले शिवम प्लस("Shivam +") ओ.पि.सि. सिमेन्टलाई नेपाली बजारमा ल्याएको छ । मजबूत तथा दिगो निर्माणको लक्ष्य बोक्दै आएको शिवमले नयाँ विशेषता तथा गुणहरुको साथमा शिवम प्लस ओ.पि.सि. सिमेन्ट बजारमा ल्याइएको बताएको छ। नेपाल गुणस्तर चिन्हका साथै आइएसओ ९००१, आइएसओ १४००१,...
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालको टेलिकम क्षेत्रको नियमन र विकासका लागि नेतृत्व गर्ने सरकारी निकाय हो । जसको प्रमुखका लागि दौडधूप सुरु भइसकेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको सुरुवात गरिसकेका व्यक्तिलाई ल्याउन नदिई स्वार्थ पूर्ति गराउने व्यक्ति ल्याउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा प्रयासहरु भइरहेका छन्...
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा विश्व बैङ्क र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणासहित पदाधिकारी र नेपालका लागि विश्व बैङ्कका देशीय व्यवस्थापक फेरिस हादाद जर्भसबीच आज भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष राणाले नेपालमा...
काठमाण्डौ । अपि पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको दुई सौर्य परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक अपि पावर कम्पनीबीच आइतबार विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । कम्पनीले धनुषाको ढल्केरबरमा १ मेगावाट र बाराको सिमरामा १ मेगावाटको सोलार पाल्न निर्माण गर्न लागेको हो । ती आयोजनासँग प्रतियुनिट...
प्रमसामु प्रदेश १ का उद्योगीका मागैमाग: विदेशी बिस्कुट–जूस आयात रोक्नेदेखि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्नेसम्म
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु प्रदेश नम्बर १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले बग्रेल्ती समस्या राख्दै त्यसको यथाशीघ्र पहल भए मात्र स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । प्रम ओली सामु उद्योग संगठन मोरंग र मोरंग व्यापार संघका अधिकारीहरुले बग्रेल्ती समस्यासँगै मागहरु समेत प्रस्तुत गरेका...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । परिसंघले एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारले केही समयअघि ल्याएको आगामी बजेटसँग तादम्य हुने गरी ल्याएको यस मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक नीतिको अवधारणालाई माथि उठाउन नयाँ नीति आधारको रुपमा पाइएको...